Taliska Africom ayaa sheegay inay duqeyn ku dileen 27 dagaalyahan oo al-Shabaab… – Hagaag.com
Taliska Africom ayaa sheegay inay duqeyn ku dileen 27 dagaalyahan oo al-Shabaab…
Posted on 4 Juunyo 2018 by Admin in National // 0 Comments
27 dagaalyahan oo ka tirsan ururka al-Shabaab ayaa ku dhintey duqeyn ay diyaaradaha Mareykanka ka fuliyeen deegaan 26 mile u jira magaalada Boosaaso ee gobolka Bari -Puntland, sida laga soo xigtay Taliska Mareykanka Afrika ee Africom.
War-saxaafadeed u baahiyay Taliska Marekanka ee Afrika ayaa lugu xaqiijiyay labadii June inay duqeyn geysteen, weerarka oo ay dowladda Federaalka wax ka ogeyd, waxaa kalo warsaxaafadeedka lugu caddeeyay in weerarka aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dad shacab ah.
Africom waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan inay qaadaan tallaabooyinka ku habboon ee saxda ah, si loo ilaaliyo amaanka muwaadinka Mareykanka, loona baabi’iyo argagixsada. “Tani waxaa qeyb ka ah in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM lagula midoobo howlgallada ka hortagga argagixisada, lana beegsado goobaha ay ku tababartaan ee Soomaliya iyo gobolkaba.” ayaa lugu yiri qoraal u baahiyay Taliska Mareykanka ee Afrika.
Duqeynta ayaa ku soo aadday saacado yar un kaddib markii dagaallamayaal ka tirsan al-Shabaab ay weerarreen saldhig ciidammada badda ee Puntland.